Social Research na Revenue | Martech Zone
Thursday, August 1, 2013 Fraịde, Ọgọstụ 2, 2013 Douglas Karr
Dika otutu ahia na ire ahia, ijiko akara ndia siri ike mgbe ufodu n'etiti ihe ndi ahia riri na isi ihe nzuta. Otú ọ dị, obi abụọ adịghị ya na mmekọrịta dị n'etiti mmekọrịta mmadụ na ibe ya na omume ịzụta. Ndị CMO na - amalite inweta nyocha na enwere nsogbu yana… ihe na - atọ ụtọ! Ihe omuma a sitere na SocialAnnex, a usoro mgbasa ozi mgbasa ozi na-elekọta mmadụ maka ecommerce, na-enye ụfọdụ isi nchọta.
Ozi ndị ahịa bara uru, ma ọ bụrụ na ọ na-eduga, nchịkwa mmadụ, mmetụta, omume ndị ahịa, na mmasị nke ịkọ amụma, ịrịọ arịrịọ ma ọ bụ iduzi ngwaahịa bụ ọrụ ahịa dị mgbagwoju anya na nke ọtụtụ akụkụ. Taa, na mmalite nke ndị na-elekọta mmadụ, ọ dị ọtụtụ karịa karịa mgbe ọ bụla mana ọ dịkwa ọnụ ala, dị mfe ma dị ike.
Tags: mara amaraiguzosi ikeịzụta mkpebiEgommetụtadata mmekọrịtaihe ntinye mmadummekọrịta mmadụ na ibe yanbanye mmadụnnyocha gbasara mmekọrịta mmadụ na ibe yammekọrịta mmadụ na ibe ya